Crunched: Ihe Ngosi Nkwupụta Nke Na-enyere Gị Aka ell Na-ere | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 4, 2012 Douglas Karr
Gbasara bu nzuko na ntaneti na ntaneti kacha egosi maka ahia. Asọmpi na folks dị ka WebEx na GotoMeeting, Crunched emeela ka usoro a dị mfe site n'inwe usoro nke na-elekwasị anya na nzukọ, nsuso na ịkekọrịta faịlụ, ngosi ma ọ bụ ihuenyo gị site na ibe weebụ. Enweghị sọftụwia maka onye ọ bụla ibudata na ntọlite… naanị zukọ ma gaa na nzukọ ezubere maka URL!
Crunched na-enye usoro igodo ndị a:
zuko - Malite web-nzukọ na-enweghị software na-a soulụ mkpụrụ obi. Ihe ndekọ ahụ na-abịa na URL onwe onye na nọmba ogbako.
jikọọ - Nwee mmekọrịta nke gị na ndị ahịa. Wezụga nkata, ị nwekwara ike ịlele mmekọrịta mmadụ na ibe nke onye bịara ya na ozi gbasara obodo.
ugbu - Jikwaa ma chekwaa oche ma ọ bụ kekọrịta ihuenyo gị. Ndị ahịa gị nwere ike ịkekọrịta ma dekọọ nkwupụta ndị ahụ!
track - Email n'ihu site na trackable njikọ, lee onye na-agụ ha na ole
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - Kekọrịta ihe ngosi, nzukọ, ndetu na ozi ịntanetị n'etiti ndị otu gị ka mmadụ niile nwee ike nyere aka nweta azụmahịa
Ndị otu ire ahịa nwekwara ike ịkekọrịta ihe ngosi ma lelee usoro dị iche iche na ndị ọrụ ahịa niile. Nke a nwere ike ikpughe ụfọdụ ozi gbasara ihe ngosi dị iche iche nwere ike ịdị n'etiti ndị na-arụ ọrụ dị elu na ndị ọzọ na otu ndị ahịa gị.
Tags: ogbako softwareakpachapuru anyagotomeeting ọzọire erewebex ozo